Ciidanka PL oo Dilay rag Al-shabaab ah
4 Jan 4, 2013 - 1:27:36 AM
Ciidamada Puntland oo Iska caabiyay Weerar Dilayna 3-nin oo ka Tirsanaa Al Shabaab
Ciidamada Dowladda Puntland ayaa iska caabiyey weerar ay soo qaadeen kooxda argagaxisada Al Shabaab/Al Qaeda habeenkii Jan. 3, 2013, iyadoo Ciidamada Puntland ay dileen 3-nin ayna dhaawaceen 5-kale oo ka tirsanaa kooxdii Al Shabaab ee weerarka soo qaaday.
Weerarkaasi ayaa dhacay abaare 10:30 habeenimo meel magaalada Boosaaso kaga beegan 40km dhanka koonfur-galbeed, iyadoo Ciidamada Puntland oo ilaalo ka haya agagaarka Buuraleyda Galgala ay iska caabiyeen ayna baacsadeen argagaxisadii Al Shabaab ee weerarka soo qaaday.
Hal askari oo ka tirsanaa Ciidamada Dowladda Puntland ayaa ku shahiiday weerarkaasi gardaradda ahaa.
Dhanka kale, maalin-nimadii Jan. 3, 2013, ayaa Ciidamada Puntland waxay qabteen nin ka tirsan kooxda Al Shabaab isagoo dhulka ku aasaya bambo.
Xogta sirdoonka ayaa cadaynaysa in kooxda argagaxisada Al Shabaab taageero dhaqaale ay ka hesho lacagaha madaxfurasho ay qaataan burcad-badeeda, iyadoo burcad-badeeda ay xiriir toos ah la leeyihiin kooxda Al Shabaab oo jab militari iyo burbur dhaqaale soo foodsaartay muddoyinkii dambe.
Dowladda Puntland ayaa si wayn u cambaaraynaysa lacagaha madaxfurasho ay qaataan burcad-badeeda waxayna Dowladda Puntland ugu baaqaysaa Beesha Caalamka in si degdeg ah loo joojiyo bixinta lacagaha madaxfurasho oo taageero dhaqaale u ah kooxaha burcad-badeeda iyo argagaxisada Al Shabaab.
Waxaa la rumaysan yahay in weerarada argagaxiso ay kooxda Al Shabaab kusoo qaado Shacabka iyo Dowladda Puntland ay ku lug leeyihiin xaalado siyaasadeed oo Soomaaliya gudaheeda ah.